DAAWO-Wasiiradii iyo Xildhibaanadii Puntland ee Gaarey Sanaag oo Booqday Ciidanka Kana Hadlay Arrimo Dhowr ah.
March 14, 2019 puntlandnews
Puntlandnews.net (BADHAN)-Xildhibaano, wasiiro, saraakiil ciidan iyo maamulka gobolka Sanaag ee Puntland ayaa kormeeray saldhigyada ciidanka iyo ilaha dhaqaalaha kale ee magaala madaxda gobolka Sanaag ee Badhan.
Somalia khataro dhowra ayaa hyasta ok ubaahan in laga hortago.
1.heshiiska Ethiopia iyo Fransiiska oo macneheedu yahay colaad run ah oo ku wajahan umadda Somalia , hadaan Biixi ogayn ogow maanta.
Waa dalka, waa dadka, waa khayraadka badda Somalia waxa ciidanka loo Samaysan.
2.sheshiiska kaluunka We dawlada Samar iyo China musiibo kuwahan
Khayraadka ,jiritaanka iyo mustaqbalka shacabka Somalia, maaha mid cayaar ah, China danteeda ayey u adeegtaa, Uma adeegto danta Somalia, waxayna suubin:
1.inay xaalufto Badda Somalia, intaan somalia hurdada ka toosin, oo u istaagin danteeda guud, oo harin dagaal, qabiil iyo cidda wadata
Oo ninkii Xamar haystaa kabixin.
2.China waxayna haysataa million tone oo qashinka hubka nugleerka oo ay ku aasin Badda Somalia, Somalia malaha awood ay joojiso ama ku ogaata.
Waxaan ogahay Somalia malaha madax, madax banaan oo umadda ka talisa, taasu waxaa ay keentay in cadawga Somalia keenu figrado cadaw, oo Ku wajaha umadda Somalia.
Somalia iyadaa maraakiib kaluumaysi waydiisan karta aduunka oo u iibgaysan karta waxa ay soo saarta, taasu waxay ilaalin kartaa Badda iyo umadda Somalia.
Somalia bangiga Aduunka ayey waydiisankartaa, soo saarida shilinka Somalia iyo ucelin qiimihii Shilinka Somalia, dawlada Xamar lacag ayey taas Ka Heli kartaa, Itaalia ayaa Somalia ka caawinkarta soo saarida shilinka Somalia, maaha inaad Tuugada Keenya aadaan, waa shacab tuugaa oo kaqaybgalay dhibaatada Somalia.
Somalia waxaa laga haystaa madax , la’aan, qiyaado, Karti la’aan, baqdin iyo kalsooni la’aa, Biixi ma oga waxa Somaliland ay raadin gooni isu taag.waxaa waxay , qaad, baqdin madax runa la’aan, cadaw la shaqayn, maskax qaad dagaalo iyo dhac jacayl. Waxaa ceeb, ceeb ah ,dadka dantooda kula gorgortama.
Somalia madax malaha, taasuna waxaa ay muran galisay jiritaanka umadda Somalia.
Hadaan shacabka Somalia toosin, waxaan ku soconaa maalin aanu kala sooc lahayn oo aynu u ogayno Somalia, Taasoo ah natiigada madax iyo inta aan kor kuxusay.
Ethiopia haka joogto dhex wareega Somalia, ha iskasoo reebto Ogadeen oo wali qafaalasho kumaqan.
Kasaar Ethiopianka dalka Somalia, u dacwood, Indian, Pakistan, shucuubta Carabta si loo mamnuuco Ciidamo Badeed ee Ethiopia, jooji kaluumaysiga China,dhabaatadu way kawayntahay, jooji xaalufta aad jeedaan.
Somalia madax malaha waa naftood danaystayaal, kama duna calooshooda ushaqaystayaal, aan ogayn shacabka cadawgu hortooda Ku hantiyin.